यामाहा आर १५ र आरएक्स १०० मिलाउदा यस्तो बन्यो नयाँ बाइक – Etajakhabar
यामाहा आर १५ बाइकको वारेमा अहिले धेरैलाई थाहा छ । तर के आरएक्स १०० को वारेमा थाहा छ ? कुनै बेला यामाहाको आरएक्स १०० निकै नै लोकप्रिय थियो । सन् ९० को दशकमा यामाहाका आरएक्स १०० का साथै आरडी ३५० र आरएक्स १३५ समेत निकै नै लोकप्रिय थिए ।
सवारी प्रदूषण मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने भएकाले यामाहाले यो बाइकको उत्पादन नै बन्द ग¥यो र यसलाई अपग्रेड गरिएन । अहिले पनि आरएक्स बाइकलाई धेरैले सम्झिन्छन् ।हाल यामाहाको आर १५ बाइक निकै नै लोकप्रिय छ । आरएक्सलाई अपग्रेड गरिएको भए कस्तो देखिन्थ्यो होला ?
यही कुरालाई मनन गरी अटोलग डिजाइनले विशेष प्रकारको डिजाइन गरेको छ, जसमा बाइकको नयाँ स्वरुप प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई यामाहा आरएक्स १५ भनिएको छ । उक्त डिजाइनमा ट्यांकी, सिट र अन्य धेरै कुरा आरएक्स १०० बाइकको राखिएको छ । इन्जिन चाहिं आर १५ को राखिएको छ । यसको १५५ सीसी इन्जिनले १९.३ पीएस पावर र १५ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २६, २०७५ समय: २०:४३:५२